musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Vashanyi veGerman Zvino Vagadzirira Mafashamo Jamaica
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett - Mufananidzo wakapihwa neJamaica Tourism Board
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett, anoti mwedzi-pamusoro-mwedzi kubva munaGunyana 2021 kusvika Gumiguru 2021 inoratidza kuwedzera kwe134% kwevhoriyamu yekubhukidza kubva kuGermany. Zvichienderana nekuwedzera uku, zvinotarisirwa kuti Mbudzi naZvita zvichapfuura mwedzi yakafanana muna 2019.
Pamusangano weTravel Talk Workshop, Gurukota rezvekushanyirwa kweJamaica, Hon. Edmund Bartlett, akati nyika yakamira zvakanaka kuti ipe zviitiko zvechokwadi.
Musangano uyu wakaitwa neboka rinotungamira rekufambisa indasitiri muGermany, FVW Medien.
Dhata inoratidza kuti vashanyi veGerman vakaratidza kukura kwakasimba mukufamba kuenda kuJamaica.
"Jamaica yakamira zvakanaka kupa zviitiko zvechokwadi kugutsa izvi zvitsva zvinodiwa uye tichave tichivaka zvimwe zvezviitiko izvi kukwezva vafambi veGerman. Kubva zvino zvichienda mberi, fungidziro dzedu dzekubhurocha dzingadai dzakapfuura pre-denda rekuhodha, "akadaro Minister Bartlett.
"Gore rinotevera rinotarisa zvakanyanya kuvimbisa, sezvo nhamba dzedu dziri kuronga zvigaro zve40,000 kubva kuGermany kwezhizha, izvo zvinokonzerwa nekuwedzera kwekufambisa ndege uye kushanda nesimba kwevose vatinotengeserana navo," akawedzera.
Gurukota vataura mashoko aya nhasi pamusangano weTravel Talk Workshop nevakuru vakuru veindasitiri kubva kuJamaica neFVW Medien, boka renhau rekuGermany rinotungamira indasitiri yezvekufamba. Chiitiko ichi chakarongwa kuita nhaurirano dzine musoro uye kuronga nzira yekukura yemusika uyu wakakosha weEurope.
"Zvinoratidzwa nedata redu ndezvekuti kwave nekukura kwakasimba muhuwandu hwevaGerman vari kutsvaga kunakidzwa Zvipo zvekushanya kweJamaica, uye denda risati rasvika, chitsuwa ichi chakagamuchira maGerman anopfuura zviuru makumi maviri kumahombekombe acho. Denda rakabva rarova, uye tese tinoziva nezve kukanganisa kwaro kumaindasitiri epasi rose, kunyanya kushanya, "akadaro Minister.
Zvisinei, akavavimbisa nezvekuchengetedzwa kwenzvimbo yacho, achicherechedza kubayiwa kwejekiseni kwakanyanya kwevashandi vekushanya uye kushanda kweTourism Resilience Corridors, iyo inosanganisira 80 muzana yevashanyi vechitsuwa ichi.
“Tave kutoona zvakanaka mhedzisiro yeCCIDID-19 manejimendi nekuwedzera kubhuka uye zvigaro. Nekuomerera kwedu kune zvirevo izvi, huwandu hwehutachiona hwakachengetwa hwakadzikira mukati meResilient Corridors - pasi pe0.1%," akadaro.
Minister vakagoverawo kuti kuwana kwekuenda kubva kuGermany kuri kuwedzera, sezvo mutakuri wechitatu weEuropean point-to-point, Eurowings, akaita ndege yake yekutanga kubva kuFrankfurt, Germany, kuenda kuMontego Bay musi wa4 Mbudzi, aine vanhu mazana maviri negumi nerimwe. uye vashandi.
Iyo sevhisi nyowani ichabhururuka kaviri vhiki nevhiki muMontego Bay, kubva Chitatu neMugovera. Ichawedzera kupinda kuchitsuwa kubva kuEurope. Pamusoro pezvo, ndege yeSwiss leisure yekufamba nendege, Edelweiss, yakatanga nzendo nyowani kamwe-vhiki nevhiki kupinda muJamaica ukuwo Condor Airlines yakatangazve kufamba nendege kaviri pasvondo pakati peFrankfurt, Germany, neMontego Bay muna Chikunguru.
Iyo FVW Travel Talk, iyo yakaitirwa kuMontego Bay Convention Center, inzvimbo yakatsvakwa yekuenda yakagadziriswa neFVW Median, Germany inotungamira indasitiri yezvekufambisa media boka. Kongiresi yezuva rimwe chete inounganidza vakuru vakuru veindasitiri muJamaica nevakuru vezvekutengeserana makumi mana nevamiriri vekufambisa kubva kuGermany, Austria & Switzerland (DACH).
Zvinangwa zvaive zveku: kuwedzera kuratidzwa kweJamaica senzvimbo yeCaribbean yesarudzo mumusika weGerman unotaura; Tarisa kune yakasimba ndege inosimuka kubva kumusika weDACH, pamwe chete nemaitiro azvino uye zviri kuitika muJamaica; uye networking kuti utange kushamwaridzana kwakakosha, ruzivo uye hunyanzvi.